Wararka - Soo kabashada suuqa birta Shiinaha ayaa sii socota
Soo kabashada suuqa birta Shiinaha ayaa sii socota, iyadoo ay jiraan halgamo caalami ah
Faafa coronavirus waxay dhibaato weyn u gaysatay suuqyada birta iyo dhaqaalaha adduunka, intii lagu guda jiray lixda bilood ee ugu horreysay sannadka 2020. Dhaqaalaha Shiinaha wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee ay ku dhacdo saameynta xirxirida Covid-19. Waxsoosaarka warshadaha dalka ayaa hoos u dhacay, bishii Febraayo ee sanadkan. Si kastaba ha noqotee, soo kabasho dhaqso ah ayaa la duubay illaa Abriil.
Xiritaanka unugyada wax soo saarka, ee Shiinaha, waxay keentay in arrimaha silsiladaha sahayda laga dareemo dhammaan qaaradaha, dhammaan qaybaha birta cunaya. Ma jiro wax ka badan marka loo eego warshadaha baabuurta, oo durbadiiba la halgamayay inay la qabsadaan borotokoollada tijaabada cusub iyo u guurista cagaaran, tamarta-badan, gawaarida
Soo saarista soo saarayaasha sameeyayaasha adduunka ayaa wali si weyn uga hooseeya heerarka cudurrada faafa, in kasta oo la fududeeyay xayiraadaha ay dowladdu soo rogtay ee dalal badan. Baahida qaybtan ayaa muhiim u ah soo saarayaasha birta badan.
Soo nooleynta suuqa birta, Shiinaha, waxay sii wadaa inay soo uruuriso xawaaraha, inkasta oo bilowgii xilli roobaadka. Xawaaraha ka soo kabashada ayaa siin kara shirkadaha Shiinaha bilow bilow ah marka macaamiisha adduunka ay dib ugu soo laabtaan suuqa, ka dib bilooyin ay guryahooda joogeen. Si kastaba ha noqotee, baahida sii kordheysa ee gudaha, Shiinaha, waxay u badan tahay inay soo nuugto wax badan oo soo kordhay.
Macdanta birtu waxay jabisaa US $ 100 / t
Kordhinta wax soo saarka birta Shiinaha, dhowaan, waxay gacan ka geysatay qiimaha macdanta birta ee ka sarreysa US $ 100 halkii tan. Tani waxay saareysaa cadaadis taban oo ku saabsan soohdimaha macaashka ee ka baxsan Shiinaha, halkaas oo dalabku weli aamusan yahay oo qiimaha birtu daciif yahay. Si kastaba ha noqotee, kordhinta kharashka soo gelinta waxay siin kartaa soo saarayaasha dhiirrigelin ay ku riixaan sare u kaca qiimaha birta bilaha soo socda.
Dib u soo kabashada suuqa Shiinaha waxay daaha ka qaadi kartaa marinka looga baxo hoos u dhaca ku yimid coronavirus ee qaybta birta adduunka. Dunida inteeda kale way ka dambeysaa qalooca. In kasta oo soo noolaynta dalal kale ay u muuqato mid gaabis badan, haddana waxaa jira astaamo wanaagsan oo laga qaadan karo kor u kaca Shiinaha.
Qiimaha birta ayaa laga yaabaa inay sii ahaadaan kuwo kacsan, qeybta labaad ee sanadka 2020, maadaama wadada soo kabashada la filayo inay noqoto mid aan sinnayn. Xaaladda suuqa adduunka ayaa laga yaabaa inay ka sii xumaato ka hor intaysan fiicnaan. Waxay qaadatay sannado badan qaybta birta inay soo ceshato inta badan dhulkii lumay, kadib dhibaatadii dhaqaale ee 2008/9.